Ny Fomba itondràn’ny Kofehy Fahasamihafana Amin’ny Fiainan’ireo Vehivavy Any Nepal sy India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2015 17:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, Català, Italiano, English
Sary avy tamin'i skinnydiver. Sehatra ho an'ny Daholobe CC0
Nicole Snow, mpandraharaha sy mpamorona ny “Darn Good Yarn“, fomba fiaina iray feno famoronana ao amin'ny aterineto ary sehatra ara-barotra momba ny kofehy izay mampifandray vehivavy manerana ny tany tontolo. Ny fandraisan'andraikitr'i Nicole no nanampy ireo vehivavy avy ao Nepal sy India mpanao taozavatra hitsinjara kofehy tsara kalitao sy entana manerana izao tontolo izao, ary nanova ireo fahaizamanaony nentin-drazana ho hevitra ahafahana mandraharaha sy ahitàna tombony azo iainana tsara.
Misafidy an-tànana vehivavy maherin'ny 300 avy ao Nepal sy India manana fahaizamanao ny “Darn Good Yarn”, mba hiasa aminà fanangonana sy fanomezana aina vaovao indray ireo rovi-damba, ary hamokatra kofehy tsara kalitao. Amin'izay, averina hatolotra hanaovana entana enti-miasa indray ireo rovi-damba voavoatra izay tokony nalefa tany amin'ny fitoeram-pako, raha toa kosa hita ao amin'ny vohikalan'ny orinasa, Amazon, na Etsy, ny fanaparitahana ireo vokatra.
Samy nampitombo ilay orinasa ho 16.000 dolara ny taona 2008 ka lasa 1 tapitrisa dolara ny taona 2015 ireo zavatra rehetra ireo. Niresaka io, vao haingana, tao amin'ny Fihaonan'ireo Fandraharahana Madinika tao amin'ny Tranom-Barotra Amerikana i Nicole, izay nilazàny fa nandany taona maro izy vao nahavita nanomboka niasa tamin'io tetikasa manokana ilàna fotoana feno io. Ankehitriny, manana fanarahana maso ara-tsosialy mavitrika ny “Darn Good Yarn”, manao fampianarana manenona sy mandrary ao amin'ireo toerana iasàny ary manana tetikasa ny hanokatra toerana fanaovana ” fibre”.
Niresaka tamin'i Nicole aho mba hahalala bebe kokoa.
Sarah Green: Herinandro vitsivitsy lasa izay, nampiantrano fivoriana iray izay nanangona ireo vehivavy mpandraharaha avy amin'ireo firenena ao anatin'ny Fikambanana Azia Atsimo ho an'ny Fiaraha-miasam-Paritra (SAARC) i New Delhi, mba hanampiana azy ireo hampiroborobo ireo asa-tànany sy ireo lambany. Mahatsapa ve ianao fa misy idirany amin'ny ataon'ny “Darn Good Yarn” io fandraisana andraikitra io? Ahoana?
Nicole Snow: Mifampizara tanjona itoviana na ny “Darn Good Yarn” , na io fivoriana io – mandrisika ireo vehivavy Aziatika handray anjara mavitrika amin'ny toekaren'ireo firenena misy azy avy. Amin'ny fanomezana alàlana azy ireo hifandray amin'ireo vehivavy mitovy fisainana aminy, ary mifanome aingam-panahy, mamorona fandraharahàna vaovao sy fahafahana manao zavatra ara-tsosialy ny fandraisana andraikitra tahàka izany.
Fony aho nandeha voalohany tany Azia, talanjona aho nahita hoe hatraiza ny fanamaivànana ny asan'izy ireo.
Tena manana fahaizamanao sy talenta tsara sy ambony izy ireo, ary tena mahamenatra hoe tsy mahalala tsara izany izao tontolo izao. Voamariko ihany koa fa misy tsy fahampiana ny famatsiana ny filàna fototra ho an'ireo faritra mahantra indrindra any amin'ireo firenena ireo. Vao maika mampitombo ny olan'ny zara fa fanànana asan'ireo vehivavy io olana io.
Izany no antony mahatonga izay rehetra fandraisana andraikitra mikendry ny hampahafantatra ny tany tontolo ireny fahaizamanao ireny ho afaka hisy finatraikany amin'ny fomba fiainan'irney vehivavy ireny sy ny asany. Mitovy amin'ny “Darn Good Yarn”, izay habaka ao amin'ny Aterineto hivarotana kofehy tsara kalitao, nanao zavatra mihoatra ny famoronana fahafahana ara-barotra fotsiny ilay famoriana tao New Delhi. Mampifandray ny lafiny roa amin'ny tsena izy io ary mampiroborobo ny asa tànana manan-danja an'ireo vehivavy avy ao Nepal sy India.
Sarah Green: Lazao bebe kokoa aminay ny fomba hanovàn'ny “Darn Good Yarn” ny fahafahana mivoatra ara-tsosialy ho an'ny vehivavy.
Nicole Snow:Ho fanampin'ny fahafahan'ireo vehivavy mitovy zavatra atao sy tombontsoa mba hifampizara ireo heviny, mieritreritra aho fa ny fanovàny ny fiainan'ireo vehivavy an-jatony any Nepal sy India no tena lanjan'ny “Darn Good Yarn”.
Tsara ho fantatra, fony aho nanomboka nifampiraharaha voalohany tamin'ireo vehivavy ireo, latsaky ny 2 dolara isan'andro ny salan-karaman'izy ireo, ary ankehitriny, mahazo 13 ka hatramin'ny 16 dolara isan'andro izy ireo!
Tratra izany rehetra izany tamin'ny fanokafana tsena iraisam-pirenena ho azy ireo, amin'ny fampiasàna fitaovana izay afaka ampiasan'ny rehetra – ny Aterineto.
Sarah Green: Nilaza ny fandehanana tany Azia ianao. Tamin'izany ve ianao no nanana voalohany ilay hevitra hanomboka ny “Darn Good Yarn”?
Nicole Snow:Ny tena hevitra dia niainga avy tamin'ny zavatra niainako manokana tamin'ny fividianana kofehy. Taorian'ny nialako tao amin'ny “Air Force”, nanomboka liana tamin'ny resaka tenona aho ary nahita fa ambany kalitao ny ankamaroan'ireo kofehy afaka vidianao any amin'ireo tsena Amerikana. Nanomboka nitady làlana hahazoana kofehy tsara kalitao ho ahy aho, izany no nahitako ny fahabangana lehibe amin'io tsena io. Nanampy ny hevitro fotsiny ny fahatsapàna fa tena nohamaivanina ny fanamboarana azy io any Nepal sy India, nahatonga ahy hanokatra zavatra manana lanjany ara-barotra, sy, miaraka amin'izany, manatsara ny fiainan'ny olona hafa.
Amiko manokana, tsy nieritreritra velively aho hoe ho fahombiazana tanteraka ilay tetikasa, ary hampisy vokany lehibe toy izao eo amin'ny indostrian'ny kofehy sy ny fahafahana ara-toekarena ho an'ireo vehivavy any Nepal sy India.
Sarah Green: Teo aloha, nifototra tamin'ny fanamboarana akanjo, sakafo sy firavaka ho an'ny tenany na ho an'ireo olona akaiky azy ireo vehivavy any Nepal sy ireo firenena Aziatika hafa. Ankehitriny, mahita fandraisana andraikitra bebe kokoa misy asa famoronana ataon'ireo vehivavy eo amin'ireo faritra ireo isika, izay mampisy vokany lehibe maneran-tany. Inona no niova?
Nicole Snow: Sahala amin'ny ankamaroan'ireo indostria hafa, manome làlana vaovao ho an'ny varotra sy fampahafantarana vokatra ny fahafahana mampiasa ny Aterineto, izay eken'ireo vehivavy maro avy amin'ireo faritra ireo. Raha afaka manondro tombony lehibe indrindra iray tamin'ny fanatontoloana ny tanàna aho, tena tonga dia ny fisokafana amin'ny fandraisana andraikitra misy asa famoronana izay nahita fom,ba hamadihana ny hasasaran'izy ireo ho vola.
Sarah Green: Amin'ny vehivavy maha-mpandraharaha anao, inona no tena atoronao matetika ireo tanora rehefa miresaka fahafahana mandraharaha? Inona no atao raha avy amin'ireo fiarahamonina mitandrina ny nentim-paharazana na misy teritery izy ireo?
Nicole Snow:Ny zavatra mora tenenina indrindra dia ny hoe tokony hifantoka amin'ny zavatra tena hainy indrindra ireo vehivavy ireo, mba hahazo fankasitrahana amin'ny asa ataony. Kanefa, ny tena marina, mila mihoatra ireo fanamby isankarazany sy haka fomba fijery vaovao izy ireo hidirana amin'ny tontolo manodidina azy ireo mba hahomby. Mila vonona ny hanome betsaka ny hery sy fotoana ho an'ireo dingana famoronana vaovao ry zareo, izay matetika ahatsapàn'izy ireo tsy fananana hery.
Ary io tsy fananan-kery io indrindra no tokony hanainga ny fanahiny hivoatra hatrany. Mino aho fa samy manana hery ampy tsara ny tsirairay, mba hanao fanovàna azo tsapain-tànana ho azy ireo na ny manodidina azy ireo, izay zavatra tsy tokony ho hadinoiny velively.